Amandla Okusekela Amakhasimende Wethu
Ngiyabonga kakhulu ngokusethemba kwakho nokusisekela kwakho.sizogcina amandla ethu okusekela amakhasimende ethu athuthukise ibhizinisi elanda kakhulu emakethe yabo ngesinyathelo ngesinyathelo. Futhi lapha singathanda ukuhlanganyela nawe ukuthi yini esingakwenzela yona, ngokulandelayo: 1.Ukusekelwa kokuhlolwa kwefactory: Yasin, asihlinzeki wethu kuphela ...
Umkhiqizi o-3 ophezulu e-China we-EMPTY CAPSULE
I-YASIN GELATIN ingumkhiqizi o-3 ophezulu e-china we-EMPTY CAPSULE. Sibambisane nomkhiqizo wemithi odumile kuwo wonke amagama. Amakhasimende amaningi ayagculiseka ngekhwalithi yethu ephezulu. Imikhiqizo yethu ephumelelayo yi-gelatin capsule kanye (veg) ne-HMPC capsule engenalutho. Sine-abili eqinile ...
I-YASIN GELATIN - Umkhiqizi onguchwepheshe we-Paintball Gelatin evela e-China
I-Paintball ngumdlalo othandwa kakhulu emhlabeni wonke. I-Paintball yizinhlamvu ezisetshenziswe kusibhamu se-paintball. I-Gelatin ingenye yezinto ezisemqoka ngenkathi kukhiqizwa i-paintball. Umthamo we-gelatin ungama-40% -45%. I-gelatin esetshenziswe ku-paintball kufanele inciphise amandla omthelela. I-gelatin inge ...
Isiqiniseko Sokulethwa Kwesitebele
Singumkhiqizi we-gelatin odliwayo / owenza imithi iminyaka engaphezu kwengu-35 eChina. Uma unenkinga mayelana nesikhathi sokulethwa esingazinzile, sicela ubheke ngezansi imininingwane yethu ngawe. Amandla we-1.Strong-Ungathola izimpahla zakho ngesikhathi nangesizini enkulu. Okukhipha nsuku zonke kufinyelela ku-8mt ...
Kuyini i-Jelly Glue Animal Glue Adhesive?
Kuyini i-Jelly Glue Animal Glue Adhesive? I-1) I-JELLY GRUE NOMA IZIMPAHLA ZESILWANE ziyizinamathiselo ezisuselwa emanzini. 2) Isinamathelisi sezilwane siwuhlobo olulodwa lweglue protein olwenziwe ngazo zonke izithako zemvelo, i-polymer yemvelo. I-3) Zitholakala ku-collagen, okuyiprotheni enezikhumba nezicubu ezixhuma ...
Senza kanjani i-capsule ethambile ngokusebenzisa i-gelatin?
Ukuqonda okungcono ngokukhiqizwa kwe-capsule ethambile. Lapha singathanda ukunikeza izingeniso eziningiliziwe ngale ndlela elandelayo: 1. Kala izinto zokusetshenziswa ngokuya ngefomula yokucubungula 2. Faka amanzi ethangini nokushisa kube ngama-degree angama-70. bese ufaka i-glycerin, i-colorant kanye ne-preservatives ku-gelati ...
Izinzuzo zikaGelatin Ezivela kuYasin
Ngemuva kokuvuselelwa kwale minyaka kubuchwepheshe, ikhwalithi yethu ithuthukiswe kakhulu. Manje izinga lethu ligcina lizinzile futhi lisezingeni eliphakeme. siye zithunyelwa USA, Bangladesh, New Zealand, South Korea, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Turkey, njll futhi amakhasimende kukhona satisfi ...
Ishadi elingenalutho le-capsule Flow
Yasin inkampani engenalutho ye-capsule esebenza ngochwepheshe kwi-capsule engenalutho e-china.Glad ukwazi ukuthi usesensimini ye-capsule futhi unedumela eliphakeme, sithemba ngobuqotho ukuqala ukubambisana kwethu kusuka kuma-oda wesampula afanayo, uma kungenzeka, amasampula anganikezwa ukuhlolwa kwakho kwekhwalithi futhi ukuqhathanisa. Si ...
Ukusetshenziswa Kwebanga Lokudla iGelatin
Ibanga Lokudla I-Gelatin Ibanga lokudla i-gelatin iyahluka kusuka ku-80 kuye ku-280 Bloom. IGelatin yaziwa njengokudla okuphephile. Izici zayo ezifiseleka kakhulu izici zayo ezincibilikayo emlonyeni kanye nekhono lalo lokwenza ama-gels aguqulwa yi-thermo. I-Gelatin yiprotheni eyenziwe nge-parti ...
Iyini INDUSTRIAL GELATIN (TECHNICAL GELATIN)?
I-INDUSTRIAL GELATIN ingumbala ophuzi ophuzi, onsundu noma onsundu, ongadlulisa isisefo esijwayelekile esingu-4mm. Iyinto eguquguqukayo, e-brittle (uma yomile), cishe into enganambitheki eqinile, etholakala ku-collagen ngaphakathi kwesikhumba namathambo ezilwane. Kuyinto ebalulekile yokwenziwa kwamakhemikhali ...
Uyini umehluko phakathi kwe-gelatin yezimboni ne-gelatin edliwayo?
ngomphathi ku 21-02-21
1. Ukufana phakathi kwe-gelatin yezimboni ne-gelatin edliwayo: Kokubili i-gelatin edliwayo neyezimboni ingamaprotheni. 2.Umehluko phakathi kwe-gelatin yezimboni ne-gelatin edliwayo: Ukukhishwa kwe-gelatin edliwayo ne-gelatin yezimboni akuyona inkinga. Umehluko omkhulu usezintweni eziluhlaza ...
UYasin Gelatin ubamba iqhaza kwi-Healthplex Expo 2020
Umbukiso we-HNC ujoyine izandla ngochungechunge lwemibukiso yomkhiqizo efana nezinto zokusetshenziswa ezinempilo, izithako zokudla, ukucutshungulwa kokudla kanye nemishini yokupakisha, imboni yesitashi, njll. umkhiqizo ...
Cha, 99, Channel Pearl Plaza, Yilan Road, Siming District, Xiamen, China.